Nanna'aa yk mirga gadii kan foddaa galmee keessaa, saajo kana yoo cuqaastee, galmee keessaa kamshaa galteewwan keessaa filachuu sidndeesiissuutu mul'atta. Kana boodaa, saajolee xiyya oliif gadii fayyadamtee gara qubannoo qaree barruu galtee duranii yk itti aanuu irraa, galmee keessaa fayyadamuu nidandeessa.
Gara fuula yk wantaa duraanitti maruuf qabduu olii cuqaasi.
Gara fuula yk wantaa duraanitti maruuf qabduu gadii cuqaasi.
Duraantoon, galfata kabiirroo hamma ati hinfilaaneetti, qabduuleen xiyyaa gara fuulaa durraanii yk itti aanuu galmee keessatti utaala. Fuuloota keessaa yammuu sakattaatuu, qabduuleen xiyyaa gurraacha ta'a, wantaa kabiirrootti yammuu utaaltuu immoo cuquliisa ta'a.
Galiinsii sanduuqa filannoo wara Naanna'aa keessaatiin hedduu walgita. Ga'umsa utaaluu kabiroo filachuu nidandeessa. Fakkeenyi yaadachiisaa kanaa, wara naanna'aa sajoo Yaadachiisaa Qindeessi keessaa wajjin qinda'aan filachuu nidandeessa. Kamshaa Naanna'insaa irraa filannoota wanta akka: gabatee, godaayyaa barruu, saxaatoo, wanta OLE, fuula, mataduree, yaadachiisaa, miseensota fakkasa, diree too,annaa, kutaalee, toorbarruu, filannoo, miiljalee, yaadannoo, galfata kasaa, foormulaa(unkulaa) gabatee, foormulaa(unkulaa) gabatee dogoggoraa filachuu nidandeessa.
Formulaawwan(unkulaawwan) gabateef, gara formulaawwan gabatee mara galmee keessatti qubattani ykn gara dogoggoraa ta'aan qofatti utaaluu nidandeessa. Formulaawwan dogoggoraaf, formulaawwan wara dogoggoraa uumanii qofatti utaalta. Sagantaan formulaawwan wara dogoggoraa uumani dhiisa (formulaawwan dogoggoraa wabii ta'aan).
Kamshaa Naanna'insa Waliin Hojeechu
Kabala marfataa sarjaa keessatti qubattani sajoo isaa irra cuqaasuun, kamshaa Naanna'insa bani.
Akaakuu wantaalee wara keessa sakattaa'uu barbaaddu sajoo issa cuqaasi. kana bodda qabdoota xiyya "Wanta Durraanii" ykn "Wanta Itti aanuu" tokkoon saani cuqaasi. Maqaawwanii xiyyoota kanaa Akaakuu wanta filattee eera. Qareen barruu wanta filatte irra ta'uu nidanda'a.
Naanna'insa galmee keessaaf, fedhiilee gooree akka LibreOffice qindeessuu nidandeessa. Kana gochuuf, Meeshaalee - Qindaa'ina filadhu. Gabatee addaa addaa baafatoota, naqa gabatee cuqoo amanfachuu yk Kamshaaleen, galmee isa dugdoo "Naanna'a" jala keessatti nanaaneesuuf dalagalee hedduu of keessaa qabu. Akaataa kanaan, dalagalee "Gara Iyyaatoo Kaasa Ittaanaa/Duraanii" fayyadamuudhaan gara iyyaatoo kasaatti utaaluu nidandeessa.
Barbaadi Irra deebi'i
Sajoo Barbaadi irradeebi'i waliin kamshaa Naanna'insa irraa barbaachaa eegaltte qaaqa Barbaadi fi Irradeebi'i dhan irradeebi'u nidandeessa. kana gochuuf, sajoocha cuqaasi. Qabduulee xiyyaa cuquliisii issa kabala marfataa sarjaa irra jiru ammaa dalaga Barbaacha fuulduratti itti fufi and Barbaacha duubaatti itti fufi fudhachu jalqaba. Yoo amma diriirtoo xiyyaa tokko cuqaastee, barbaachii jecha qaaqa Barbaadi fi Bakkabuusi saagameef itti fufa
Title is: Naanna'iinsa